Azia Atsimo Atsinanana: Tafihana ireo mpiaro ny zon’olombelona sy mpanao gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Aogositra 2020 5:36 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, русский, bahasa Indonesia, Ελληνικά, Español, English
Ny vahoaka teo anoloan'ny Fitsarana Heloka Bevava manangana rantsantanana telo mariky ny ‘Lalao Hanoanana’ taorian'ny didy fampisamborana vonjimaika an'i Anon sy Panupong. Saripika sy fanazavana avy amin'i Prachatai, mpiara-miasa amin'ny Global Voices ara-botoaty.
Nanomboka tamin'ny 31 Jolay, mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona sy mpanao gazety maro manerana an'i Azia Atsimo Atsinanana no nosamborina, nomelohina ary niaina herisetra izay mampiseho ny firongatry ny fanafihan'ny fanjakana ny fahalalahana maneho hevitra.
Tany Thailandy, voasambotra ny mpisolovava sy ny mpianatra mpikatroka iray noho ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ny fihetsiketsehana manohana ny demokrasia. Notànana ny lehiben'ny sendika Kambodziana noho ny fanambarany ny ahiahiny momba ireo tantsaha voalaza fa very tany any amin'ny sisintany Vietnam-Kambodza. Biraon'ny fampitam-baovao miisa telo any Malezia no nanaovana bemidina noho ny fandefasana fanadihadiana momba ny fomba fitondran'ny governemanta ireo mpiasa mpifindra monina. Ary farany, voaheloka ny voampanga miisa valo tao Vietnam noho ny ‘fanakorontanana ny filaminana’.
Manao famoretana ny fihetsiketsehana manohana ny demokrasia i Thailandy
Nosamborina tamin'ny 7 Aogositra ny mpisolovava mpiaro ny zon'olombelona Anon Nampa sy ilay mpikatroka tanora Panupong Jadnok noho ny fandraisany anjara tamin'ny fihetsiketsehana manohana ny demokrasia tamin'ny volana lasa teo.
Tao anatin'ny volana vitsivitsy, nokarakaraina ny fihetsiketsehana mitaky ny fanavaozana demokratika ao amin'ny firenena. Namoaka fitakiana miisa telo ireo mpikatroka tanora: fampitsaharana ny antsojay atao amin'ireo olom-pirenena, fanamboarana lalàmpanorenana vaovao ary fandravana ny parlemanta. Nolavin'izy ireo ihany koa ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila ho vahaolana tamin'ny krizy politika izay nihalehibe rehefa naka ny fahefana ny tafika tamin'ny taona 2014.
Navotsotra vonjimaika i Anon sy Panupong ny ampitson'iny. Nomena baiko izy ireo mba tsy hamerina ny fahadisoana voalaza fa nataon'izy ireo. Taorian'ny nanafahana azy ireo dia nivoady i Anon hanohy ny fahalalahany maneho hevitra ary nampiany fa mbola mikasa ny hanao fihetsiketsehana izy ny 16 Aogositra. Manana hafatra ho an'ny manampahefana izy:
Ilain'ny firenena izahay ary manaja ireo izay tsy mitovy hevitra aminay. Tianay hihaino anay ianareo. Misaotra an'ireo manampahefana izay nikarakara anay izahay, fa ho an'ireo izay nanao ratsy kosa dia ho tonga izahay hijery ny momba azy ireo.
Anon Nampa taorian'ny famotsorana azy. Saripika sy fanazavan'ny Prachatai, mpiara-mizara votoaty amin'ny Global Voices.
Mpitarika sendikaly Kambodziana nosamborina
Nosamborina tamin'ny 31 Jolay ny mpitarika sendika Kambodziana sady mpikambana ao amin'ny Filankevitra Mpanara-maso Kambodziana Rong Chhun taorian'ny fangatahan'ny Komity misahana ny Sisintany ao Kambodza tamin'ny mpitandro ny filaminana hiampanga azy tamin'ny ‘fanentanana amin'ny fanaovana heloka bevava sy fanakorontanana ara-tsosialy’ noho ny fanapariahana ‘vaovao faikany’ momba ny olan'ny fananan-tany any amin'ny sisintanin'i Vietnam-Kambodza.
Rehefa avy nitsidika ny sisintany tamin'ny 20 Jolay, namoaka fanambarana ho an'ny Filankevitra Mpanara-maso ao Kambodza i Rong Chhun nanehoany ny ahiahiny fa very tany ny vondrom-piarahamonina mpamboly izay nolazain'izy ireo fa noho ny nataon'ny manampahefana.
Taorian'izay dia nomelohin'ny Komity misahana ny Sisintany ao Kambodza i Rong Chhun noho ny familian-dalana ny olana.
Manodidina ny 141 ireo vondron'ny fiarahamonim-pirenena nanao sonia fanambarana mitaky ny famotsorana ny filohan'ny sendika. Nasongadin'izy ireo ihany koa ny fiantraikany ratsy amin'ny fitazonana an'i Rong Chhun:
Fandrahonana mivantana ho an'ireo Kambodziana rehetra izay mampiasa ny zo faritan'ny lalàmpanorenany amin'ny fanehoana hevitra an-kalalahana tsy matahotra fahatongavan'ny polisy amin'ny sasakalina na ny taona maro very any am-ponja ity fisamborana ny mpitarika ny sendika hajaina iray ity.
Omaly, nametraka sakana teo anoloan'ny Fitsarana Monisipaly Phnom Penh ny manampahefana hanakanana andiana olona mitaky ny famotsorana an'Atoa Rong Chhun, filohan'ny Fikambanan'ny Konfederasiona ao Kambodza, izay nosamborina tamin'ny 31 Jolay 2020 noho ny fanamarihany momba ny sisintany Kambodza-Vietnam.
Biraon'ny Media tafihana ao Malayzia
Nanaovan'ny polisy bemidina ny biraon'ny Al Jazeera ao Kuala Lumpur izay natao fanadihadiana noho ny fampisaraham-bazana rehefa namoaka fanadihadiana momba ny fomba fitondran'ny governemanta ireo mpifindra monina mandritra ny valan'aretina COVID-19. Nanaovana bemidina ihany koa ny sehatra fampitam-baovao Maleziana ASTRO sy UnifiTV noho ny fandefasana ilay fanadihadiana nataon'ny Al Jazeera.
Nilaza ny manampahefana fa manaratsy sady tsy mitombina ilay fanadihadiana ‘Tafahitsoka amin'ny fihibohan'i Malayzia’ noho ny filazana tao anatin'izany fa ampijaliana ireo mpifindramonina any amin'ny foibe fifindra-monina.
Saingy nanamarika ny Foiben'ny Asa Fanaovan-gazety Mahaleotena fa mbola tsy nandiso tamin'ny fomba ofisialy ny fiampangana tao anatin'ilay fanadihadiana ny governemanta. Nanolo-kevitra ny manampahefana io hifantoka amin'ny fanadihadiana ny mahazo ny mpifindra monina fa tsy hanao fandrahonana ny fampahalalam-baovao:
Averinay indray ny antsonay ho an'ny governemanta hanao fanadihadiana mahaleotena na famotopotorana momba ireo zava-boalaza ireo, araka ny voalaza ao amin'ny fanadihadiana, ka amin'ny alàlan'ny vokatry ny fanadihadiana no handraisany fanapahan-kevitra.
Ankoatra ny bemidina, tsy nohavaozin'ny governemanta Malayziana ny visa ahafahana miasa ho an'ireo mpitati-baovaon'ny Al Jazeera roa.
Mpanao gazety sy mpikatroka valo helohin'i Vietnam
Tamin'ny 31 Jolay, nanameloka voampanga miisa valo amin'ny ‘fanohintohinana ny filaminana’ ny fitsarana tao an-tanàndehiben'i Ho Chi Minh.
Iray tamin'ireo voaheloka i Ngo Van Dung, mpanao gazety sady mpikambana ao amin'ny vondrona ho an'ny fahalalahana an-gazety Vietnamiana antsoina hoe Vondrona Hien Phap (Lalàm-panorenana). Mitaky ny fampiharana ny lalàna ao amin'ny lalàm-panorenan'i Vietnam izay voalaza fa manome antoka ny fahalalahana an-gazety ity tambajotran'ny mpanao gazety sy mpikatroka ity.
Notanana am-ponja vonjimaika efa ho roa taona i Ngo Van Dung taorian'ny nisamborana azy tamin'ny taona 2018. Voasazy higadra dimy taona an-tranomaizina izy miampy roa taona fahafahana arahana fepetra.
Anisan'ireo voaheloka ny mpikambana iray hafa ao amin'ny Hien Phap, i Doan Thi Hong, na dia teo aza ny fangatahana famotsorana azy noho izy manan-janaka latsaky ny telo taona. Mandrara ny fitazonana ny reny manan-janaka latsaky ny telo taona ny lalàna Vietnamiana.